Ndị na-emepụta ihe nrụpụta dị elu na ndị na - eweta ya - Highlọ ọrụ nrụpụta nnukwu igwe China
DAYA kwụ ọtọ akụkụ abụọ crank ntụmadị pịa VS Ndị ọzọ kwụ ọtọ akụkụ abụọ crank press Daya pịa Daya pịa: na ikpo okwu na nchekwa ngere, adaba maka ipigide mmezi na mgbanwe nke jụrụ mmanụ, isi moto belt bụ rụrụ na mfe ịgbanwe, na-adaba adaba na ụdi mmezi. . Ọ dị nchebe ma na-adaba adaba. Ndị ọzọ na-pịa ndị ọzọ pịa: Enweghị mmezi ikpo okwu. Ipigide mmezi, nnọchi nke jụrụ mmanụ, omumezi ukpụhọde nke isi moto belt, wdg.
C ụba High Speed ​​Press
Njirimara ịrụ ọrụ 1. Ejiri ígwè awara awara ahụ rụọ ya. Mgbe nsogbu nrụgide dị n'ime, ihe ahụ kwụsiri ike na nkenke na-agbanweghị agbanwe, nke kachasị adaba maka nrụpụta zọgide na-aga n'ihu; 2. Ugboro abụọ na-eduzi okporo ígwè, otu ogidi etiti etiti, na-eji njehie njehie efu iji dochie usoro ihe eji eme ihe eji eme ihe, iji belata esemokwu na-agbanwe agbanwe na nke kachasị, ma na-akwado mmanu mmanye iji belata nrụrụ ọkụ ma nweta ...